बार LCD स्क्रीनहरूका लागि सामान्य जडान विधिहरू के हुन्? - समाचार - शेन्ज़ेन गुआनशुन केजी टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
विज्ञान र प्रविधिको विकासले एलसीडी उद्योगको टेक्नोलोजिकल प्रगतिलाई बढावा दिंदा, स्ट्रिम एलसीडीजस्ता उदीयमान एलसीडी उत्पादनहरू देखा पर्‍यो। यसको अनौंठो लामो पट्टी आकारले मान्छेहरूलाई आँखा मनपर्दो देखिन्छ। Xunrui बार आकार को LCD स्क्रीन तरल क्रिस्टल सामग्री बाट बनेको छ। तरल क्रिस्टल सामग्री दुई समानान्तर प्लेटहरू बीच भरिन्छ, र तरल क्रिस्टल सामग्री भित्र अणुको अवस्था भोल्टेज द्वारा छायांकन प्राप्त गर्न परिवर्तन हुन्छ र प्रकाश प्रसारणले विभिन्न गहिराइ र प्रकाशको उद्देश्य देखाउँदछ। ईन्टरलेस्ड छविहरूका लागि, दुई स्लाइसहरू र तीन-रंग फिल्टर तह थपिएसम्म, र images छविहरू प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। पट्टी LCD को सेवा जीवन विस्तार गर्न, पट्टी LCD का लागि जडान विधिहरू के हुन्?
पट्टी एलसीडी स्क्रिन र मुद्रित सर्किट बोर्ड जडानको लागि त्यहाँ तीन मुख्य विधिहरू छन्: जेब्रा स्ट्रिप्स, धातुई सीसा, र कन्डक्टिभ फिल्म (एफपीसी)। यी तीन बार आकारको LCD स्क्रीन विधिका आफ्नै फाइदाहरू छन्, र अनुप्रयोगको क्षेत्र पनि फरक छ।
जेब्रा स्ट्रिप जडानको सब भन्दा ठूलो फाइदा भनेको यो स्थापना गर्न र सजिलै छुट गर्न सकिने कुरा हो। यो तरल क्रिस्टल डिस्प्लेको परीक्षण र चरित्र मोड्युलहरूमा प्राय जसो प्रयोग गरिन्छ। गैरकानुनीहरू ठूलो आकार, कठोर वातावरणको कमजोर प्रतिरोध, र मुद्रित सर्किट बोर्डको सतह समाप्तको लागि उच्च आवश्यकताहरू हुन्।
प्रवाहकीय फिल्म हाल ठूलो साइज डट मैट्रिक्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेको लागि सबैभन्दा सामान्य जडान विधि हो। यसको मुख्य फाइदाहरू भनेको सानो अन्तरिक्ष व्यवसाय, हल्का तौल, र मुद्रित सर्किट बोर्डको कुनै सापेक्ष स्थिति हो। यो विशेष गरी बहु इलेक्ट्रोडको बाक्लो व्यवस्थाका लागि उपयुक्त छ। फाइदा यो हो कि यसलाई पृथक गर्न सकिदैन। , रखरखाव गाह्रो छ, र कन्डरेटिभ फिल्म कठोर वातावरणमा टुक्रिनेछ।
धातु सीसा जडान विधिको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो हो कि यो फर्म, भरपर्दो, र इलेक्ट्रोड पिन बाहिर निकाले पछि स्थापना गर्न सजिलो छ। यसको मुख्य नुकसान यसको ठूलो आकार र फराकिलो प्रदर्शन इलेक्ट्रोड पिन स्पेसिing हो। थप रूपमा, गिलास मोटाई आवश्यक छ। त्यसकारण, मिटर इलेक्ट्रोडको स small्ख्या साना छ र वातावरण कमजोर छ जब गिलास पिन अक्सर प्रयोग गरिन्छ।